Joe Biden oo ku guuleystey doorashada madaxtinimada dalka Maraykanka -
Home News Joe Biden oo ku guuleystey doorashada madaxtinimada dalka Maraykanka
Joe Biden oo ku guuleystey doorashada madaxtinimada dalka Maraykanka
Joe Biden ayaa la shaaciyay inuu kuguuleystey doorashada dalka Maraykanka kadib markii uu helay illaa 273 codadkii ergooyinka.
Goordhow ayay warbaahinta Maraykanku shaaciyeen warkan iyadoo Biden oo ah 78 jir, uu noqonayo Madaxweynihii ugu da’ada weynaa ee xilkaas ku guuleysta.
Biden ayaa noqonayaa qofkii saddexaad ee ka guuleysta madaxweyne xika haya dalka Maraykanka qarnigan.
Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu goordhow taleefishinka kala hadlo shacabka Maraykanka.
Hase yeeshee Donald Trump ayaa xilligii uu soo baxayay warkan waxa uu ku jirey garoon lagu ciyaaro xeegada manajirtoillaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay Trump oo hore u sheegay in tirinta codadka ay tahay mid lagu shubtay.
Kamala Harris ayaa noqonaya Madaxweyne ku xigeenka dalka Maraykanka iyadoo ay tahay haweeneydii ugu horeysay oo xilkaas ka qabata dalka Maraykanka, waana qofkii ugu horeeyay oo ka soo jeeda dadka Madow iyo Aasiya oo derejadaas ka gaara dalka Maraykanka
Previous articleBaarlamaanka Ethiopia oo kala direy Maamulka Tigreyga
Next articleMadasha Xisbiyada Qaran oo si weyn uga soo horjeestay magacaabida Guddiyadda doorshada